Ahoana no fomba hamoronana sitemap ao Visio? - Faq
Tena > Faq > Sarintany tranokala Visio - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Sarintany tranokala Visio - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Ahoana no fomba hamoronana sitemap ao Visio?
Ao amin'ny template / sokajy Software sy Database, kitihoSarintany amin'ny tranokala.
Avereno jerena ny haavon'ny ambaratonga avo indrindra sy ny isan'ny rohy izay ho hita.
Mba ampanjifaina nyTranonkalahita, tsindrio ny Fikirana aryAzairay amin'ireto: ...
Ao amin'nyMiteraha sarintanyboaty fifampiresahana, kitiho OK.
Salama, tongasoa eto amin'ny tranonkala momba ny Internet Ity no lahatsoratra fampianarana sy ny fomba fanaovana sitemap Ity misy ohatra iray amin'ny sitemap fototra Ho an'ny orinasa mpamorona noforonina antsoina hoe Monday May Design ary zavatra vitsivitsy hodinihina momba ity sitemap ity dia ho hitanao fa misy ambaratonga avo indrindra amin'ny boaty ao amin'ity sitemap ity ary matetika no heverina ho toy ny fitetezana ambaratonga voalohany izay matetika no tena fitetezana tranokala. Fanamarihana Misy boaty eo ambanin'ny haavo ambony Ny haavon'ny boaty voalohany Mazàna maneho an'izay fantatra amin'ny hoe pejy kely ary indraindray dia antsoina hoe pejy haavo faharoa, noho izany misy tsipiriany hafa ahafahana manamarika ao amin'ny sitemap manana andian- litera sy isa azonao ampiasaina amin'ny fizarana 'Serivisy'. Ny saha voalohany dia misy marika C ary ny saha etsy ambany dia misy marika C iray hatramin'ny enina.
Antsoina hoe fanoratana alphanumeric ity ary tena manampy anao ny mandamina ny sitemap anao ary azonao jerena miaraka amin'n ity marika alphanumeric ity fa tsy ny anaran'ny pejy, koa maninona raha? Ny famoronana sitemap a sitemap no tena drafitra ho an'ny tranonkala iray manontolo ary zava-dehibe tsy ho anao amin'ny maha mpamorona mpamorona endrika anao ihany fa ho hitan'ny mpanjifa koa ny fomba fandaminana ilay tranokala. Ka andeha hojerentsika ny tranonkala iray santionany fa ity fitetezana ambony ity no asehon'ity ambaratonga voalohany ity, raha mihodina amin'ny ambaratonga voalohany ianao dia ho hitanao fa manana takelaka kely amin'ireto faritra ireto izahay, ary ireo pejy ireo dia handalo ity ambaratonga faharoa ity ka ny haavon'ny boaty faharoa no mety ho mora indrindra manoritra ny tranonkalanao aloha ka mora kokoa ny mandamina ireo sekolinao alohan'ny hanombohanao misarika azy ireo ka izay ataoko matetika dia manaova tabilao kely misy, ary hitanao fa eto ianao dia afaka milalao miaraka amin'ireo fizarana nametrahako ny lohateny alphanumeric ary tsikaritro fotsiny fa ity dia kinova fanafohezana ny tranokala hafa efa misy, ndao hojerentsika ny fomba hanoratantsika ny sitemap ka eto aho manana modely namboarina tao Illustrator ary ny sasany amin'ireo lahatsoratra vitsivitsy voalohany azoko antoka fa nahazo ny lisitry ny tranokalanao ianao ka alao antoka fa manana ny anaram-boninahitra ianao, imbetsaka ianao no mila isa kinova ary daty ary ity dia modely fotsiny mba hahafantaranao fa handeha fotsiny aho ampiasao ity ho toy ny sasany s Ort of guidance aho afaka mamafa ireo zavatra tsy tiako hampiasaina, ary afaka miditra ato aho ary manomboka manova ny anaran'ireo pejy ireo mba hisaintsaina ny lisitry ny atiny mba hahitanao fa eto no nanombohako nibanjina ny masoko ny takolako dia mieritreritra fa ny manaraka dia solafaka, ka mandroso aho ary mamorona an'ity ambaratonga ambony ity izay hisolo tena ny fitetezana lehibe rehetra ka andao hiverina any amin'ilay drafitra, azontsika atao daholo ny mijery ny maso ka te-ho afaka hanoratako azy, hanehoana azy ireo, avy eo mba hanehoana azy ireo ao ambanin'ireo fizarako lehibe hanombohako hanoratra ny boaty ho an'ny pejiko. Ka raha miverina amin'ny fizarana maso isika ohatra dia hisy ny eyeshadow Luminess sy eyeshadow an'ny perla mba hahafahako miverina eto ary manova izany ho pearlokay mamirapiratra.
Azonao atao ny mandroso ary mampiasa ny fitaovana fifantina hisafidianana ireto boaty ireto raha tsy mila azy ireo aho ary mamafa fotsiny azy ireo okay ary koa ny zavatra mitovy amin'ireo tsipika azonao atao ny manova ny habeny ary raha te hanao boaty fanampiny aho dia afaka mampiasa ilay fitaovana fisafidianana, kopia ary apetaho ny oops ary atombohy manampy subpages fanampiny amin'ny mysitemap noho izany dia karazana fizotran'ny famoronana sarintany tranokala haingana sy maloto ary manantena aho fa mahita ity manampy ity ianao
Ahoana no hamakiako saritany ny tranonkalako?
Ilay tranonkalasarintanydingana atranonkalatetikasa dia dingana stratejika izay raha vita tsara dia hametraka ny feonymanontolotranonkala.
Dingana 4 hamoronana tranokala mahombySarintanytetika
Dingana 1: Mametraha tanjona. ...
Dingana 2: Fanaraha-masonyToerana efa misy. ...
Dingana 3: DinihonyArchitecture an'ny tranokala. ...
Dingana 4: AtombohynytoeranaSarintany.
keychain famantarana microsoft
- Salama daholo ary tongasoa amin'ny andiany vaovao amin'ny fantsoko YouTube. Ity andiany ity dia hanoratra ny fizotry ny famolavolana sy fananganana ny tranokalako fotsiny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany rehefa natomboka izy. Tany am-piandohana aho dia nieritreritra ny hametraka an'izany rehetra izany ho lahatsoratra ary koa topy maso ny fomba nanorenako azy tamin'ny farany, raha izany no mitranga, saingy tsapako fa afaka asehoko anao bebe kokoa ny fizotrako eny am-pandehanana rehefa manamboatra aho ity lahatsoratra ity amin'ny ampahany ho an'ny ampahany tsirairay amin'ny fizotrany.
Ho azonao atao ny mijery akaiky ny fomba fiasako ary, eny, mianatra fotsiny izany ambadiky ny sehatra ary antenaina koa fa hahalala bebe kokoa, noho izany. Manantena aho fa tsara ho anao io. Ao amin'ny lahatsoratra anio, ny voalohany amin'ity andiany ity dia manadihady amin'ny dingana fandrindrana izahay; manomana ny sitemap, manomana ireo pejy ilaiko mamolavola.
Ity dia ampahany tena lehibe amin'ny fizotrany. Mety tsy ny ampahany mahafinaritra indrindra amin'ny fizotrany izany, satria tsy hoe mandamina piksel amin'ny pejy ianao ary mamorona endrika mahafinaritra, eritreritra sy drafitra maro izay miditra ao mialoha. Alohan'ny ahatongavanao amin'ireo dingana ireo, saingy heveriko fa zava-dehibe ihany izany, ary manan-danja tahaka izany koa ny fahitanao azy, koa manantena ny hiara-drafitra aminao aho anio.
Ananako ny iPad-ko, ny Apple Pencil-ko ary andao handeha. Voalohany, andao jerena ny tranokala misy ahy araka ny eritreritro? Niverina tao anaty ...
Tsy tadidiko izao raha tamin'ny 2014 na 2015, fa izao vao fantatro fa taloha kelin'izay. Ary izany no antony ilana fanavaozana kely ny endrika. Nanova kely ny marika nataoko aho nanomboka teo ary tsy tena mifanaraka amin'ny filako intsony ity tranonkala ity. tena mifanaraka amin'izay ilaiko amin'ny tranonkala iray? Nanoratra tamina bilaogy tsy tapaka ihany koa aho tao amin'ny tranonkalako taloha.
rafitra hadisoana terraria.threading
Tsy tamin'ny taona lasa, fa izaho dia teo aloha. Nanapa-kevitra aho fa tsy handefa an'ity bilaogy ity amin'ny tranokalaniko vaovao. Izay, eny an-dalana, dia hoforoniko ao amin'ny Webflow.
Heveriko fa fomba fiasa hita maso kokoa amin'ny fananganana tranokala iray izay tena tsy mila fantatrao ny fomba fikajiana azy hatramin'ny voalohany hananganana azy ao amin'ny Webflow. Ary manana CMS tena tsara koa izy ireo, toa tena matanjaka izany ka manantena ny hanandrana izany aho raha manana fomba hahatonga ny lahatsoratra WordPress rehetra ho any Webflow ianao, fa nanapa-kevitra fotsiny aho fa tsy miraharaha aho fa hikarakara. . Havelako io taloha.
Misy lahatsoratra roa mety horaisiko ao amin'ny bilaogiko vaovao izay ho ataoko, izay hiditra ao anatin'ny fotoana fohy, saingy eny. Amin'ny ankabeazany, ity tranonkala ity dia nohavaozina tanteraka. Tiako ho somary malefaka kokoa ny tranokalako vaovao.
Te-hanao zavatra vitsivitsy hafa koa aho. Ny voalohany dia ny ivon'ny atiny. Izany no karazana hevitro ho an'ilay teo aloha, saingy tsy dia toa izany no izy.
Ny ankamaroany dia ny bilaogy sy ny rohy mankany amin'ireo farany teo amin'ny pejy fandraisam-bahiny fotsiny, fa tiako ny lahatsoratra ao, podcast any, lahatsoratra bilaogy ao ary miaraka daholo no hikarohana, ka raha te hahalala zavatra amin'ny lohahevitra manokana ianao dia afaka mamorona pejy ho an'ity lahatsoratra ity, ity bilaogy ity, ary ity podcast ity izay tokony hohenoinao momba an'io lohahevitra io. Ka eny, ny zavatra voalohany dia ny mampiaraka ny atiny rehetra, satria amin'izao fotoana izao dia misaraka fotsiny ny zava-drehetra. Ny faharoa dia mazava ho azy, satria mpamorona aho, mila manana ny portfolio-ko amin'ny tranokalako, ary tsy ny asako famolavolana fotsiny no tiako hananana portfolio vaovao, fa tiako koa ny pejin'ny mpandahateny.
Toy ny portfolio-na kabary ampahibemaso ataoko mba hanandrana hisarika ny maro amin'izy ireo. Mikasa ny hanomboka bilaogy indray aho araka ny efa noresahiko teo aloha fa lohahevitra hafa kely kosa amin'ity indray mitoraka ity. Tena te-hanoratra momba ny ambadiky ny orinasako aho.
Noho izany, ny famoahana lahatsoratra momba ny hoe ahoana ny fanombohana orinasa iray sy ny fiaraha-miasa amin'ny mpitan-kaonty, ny tatitra momba ny fidiram-bola, angamba zavatra eritreretiko hatao, ireo zavatra ireo dia tsy mifanaraka amin'ny fantsona YouTube -ko izay mifantoka kokoa amin'ny famolavolana. ny hevitro, fa hey mbola misy zavatra tiako hapetraka. Ka heveriko fa tsara ny manoratra momba izany. Ka ho eo amin'ny tranokalako vaovao io.
Ary farany, te hitondra fivarotana amin'ity tranonkala ity aho amin'ny farany. Amin'izao fotoana izao ny fivarotako amin'ny Internet dia eo amin'ny sehatra hafa. Marika iray hafa mihitsy koa io, fa amin'ny ho avy dia tiako ny hitondra an'io ary hanana ny zavatra rehetra amin'ny toerana iray.
Tsy hanahirana an'izany aho izao. Ka mifantoka amin'ny atiny sy ny portfolio fotsiny izahay. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia andao hanomboka handamina.
Ary ny zavatra hataoko voalohany dia ny manoratra amin'ity pejy ity, raha ny tena izy dia manoratra atiny aho na manoratra. Satria ireo no fisainana roa tian'ny olona atao rehefa tonga eo amin'ny tranonkalako ny fahitako azy. izany. Na mitady votoaty hianarana momba zavatra avy amiko izy ireo, na liana te handray ahy amin'ny antony manokana izy ireo.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, andao hanomboka handrafitra izay pejy hilaiko ao anatin'ny tranokala. Mazava ho azy fa ny voalohany dia pejy fandraisam-bahiny. Mahatsapa aho fa mila tranonkala iray izay ivon-toerana.
Ka ny atiny fotsiny no hosoratako. Mety ho sokajy sasantsasany izay ho voatanisa sy hatolotra ho toy ny saika ny lisitry ny playlist ananako ao amin'ny fantsona YouTube-ko, fa tsy lahatsoratra fotsiny dia hisy bilaogy sy podcast ihany koa. Ary avy eo, ao anatin'ny atiny, mila maodely telo samy hafa ihany koa aho amin'ny ankapobeny.
Mila feo, lahatsoratra ary fanoratana aho. Mety manontany tena ianao hoe ahoana no nahatonga ahy ho mpamorona raha tsy afaka nanao boaty akory aza aho, fa hey. Toy izany no fiasany.
Izaho koa mila mila portfolio-ko. Ary ao anatin'izany dia hanana zavatra toy ny tetik'asa iray aho. Mazava ho azy fa mila maodely ho an'izany koa aho.
tsy fitovizan'ny solosaina taraiky
Hataoko eto koa ny pejiko miteny izay noresahiko. Avy eo dia hisy ny fototra, ity dia momba ny pejy ary angamba ny pejy fifandraisana. Raha ny tena izy, mety ho ahy ny manana form ao amin'ny tranonkalako ho an'ny andiam-pandinihako portfolio as part of the contact us nk.
Amin'izao fotoana izao, ny torolalana ho anao dia ny handefasanao mailaka misy tsipika manokana sy ny Add information mba hahafahako mijery ny portfolio-nao amin'ity andiany ataoko ao amin'ny YouTube ity? Saingy tsy ny olon-drehetra no mampiasa ny laharam-pitsipika marina, ka tsy mankany amin'ny fampirimana marina ao amin'ny boaty fampidirana ahy, ary tsy ny rehetra no manome ny fampahalalana ilaiko. Noho izany, heveriko fa manana karazana endrika ao amin'ny tranokalaniko aho, azonao atao ny mameno ny antsipirihanao ary mandefa izay hanamora ny fizotrany rehetra ho an'ny olona rehetra tafiditra. Pejy iray ao amin'ny tranonkalako izay lasa be olona ankehitriny noho ny lahatsoratra iray malaza be izay ahafahanao misintona ny bokiko fanontana amin'ny efijery.
Amin'ny ankapobeny dia tsy misy afa-tsy ny lahatsoratra sy ny endrika ary ho azonao ao ny torolàlana. Izany no fomba ahatongavan'olona betsaka amin'ity lahatsoratra ity. Nieritreritra ny hanana an'ity pejy ity ho ao anatin'ity tranonkala vaovao ity aho, saingy heveriko fa ny tena hataoko dia ny fanaovana pirinty ho sokajy ao anaty atiny, eto ka ho ampahany amin'io fomba io ny endrika ato amin'ity Pejy iray hahafahanao misintona azy ary koa lahatsoratra na lahatsoratra bilaogy na izay nosoratako momba ny fanontana efijery eo anelanelako dia tokony hanoratra koa aho ...
Ampiako eo akaikiny ihany na izany aza. Toy ny pejy sokajy? Ny pejy atiny dia misy ny atiny rehetra, ary avy eo ny pejy sokajy dia ilay lisitra filalaovana. Ataoko fa aiza no soratana audio, lahatsoratra.
Mieritreritra bebe kokoa momba an'ity pejin'ny fifandraisana ity koa aho. Heveriko fa hanana fanolorana endrika tsy miankina ihany koa aho, koa raha misy tetik'asa tianao hiara-hiasa amiko dia azonao atao ny mameno ity vaovao ity momba ilay tetikasa. Mila modely pejy tsotra ihany koa aho izay azoko esorina amin'ny fotoana rehetra ho an'ny freebies.
Izany no zavatra tiako hatao toy ny afovoan-kazo, isaky ny avy ary avy eo, mora ny manome fanomezana. Ary hanaovana an'izany dia manana olona mameno takelaka ahafahako misafidy kisendrasendra ny mpandresy avy eo, Eny, pejy tsotra azoko atao mitovy dika sy mamorona fanomezana vaovao amin'ny fotoana rehetra dia tena manampy tokoa. Eritrereto ny zavatra hafa tiako hoentina ato amin'ny tranonkalako ankehitriny, ny pejy tokana izay tena tsy dinihiko eto ary tsy ampiako dia ny pejin'ny mailakao.
Ka pejy iray ihany no azoko momba ny fisoratana anarana amin'ny taratasiko. Heveriko fa tsy hanao an'izany aho satria tsy dia nahazatra loatra tamin'ny famoahana gazety tato ho ato, ary mieritreritra aho fa tsy hanana taratasim-baovao noho ny antony fisoratana anarana ny olona, ​​aleoko manana endrika isaky ny pejy sokajy afa-po izay azonao fenoy ao raha hahazo manokana, tsy haiko, opt-in PDF, zavatra na zavatra hafa izay hamboariko. Ary avy eo afaka mahazo mailaka momba an'io lohahevitra manokana io amin'ny ankapobeny izy ireo ary ho ampidirina ao anaty lisitra ihany koa aho rehefa mandefa mailaka heveriko fa tokony hanemotra izany tokoa aho.
Tsy haiko ny mamindra ny ngs amin'ity app ity ka mamafa azy fotsiny aho ary manoratra azy indray. Fa mieritreritra aho fa ny trano dia tokony ho hita ambonin'ireo zavatra hafa rehetra ireo. Satria ny pejin-tranoko dia ho ivon'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny trano toa ahy, dia hesoriko izany freebies izany.
Fa ny zavatra hafa rehetra heveriko fa avy amin'ny pejy fandraisana, ary ny pejin-trano dia hamboarina hitarika anao amin'ny zavatra tsara. Miaraka amin'ireto zavatra roa ireto manokana, eritrereto: ny atiny na ny toetrako ho zavatra lehibe tadiavinao. Ka io no fanapahan-kevitra voalohany raisiko. (mihomehy) Avelao hisy hihaona rehefa tonga eto amin'ity pejy ity izy.
Izay ny atiny, izany no eritreretiko, ary ireo pejy roa ireo dia miara-mandeha. Toa asa be izao, sa tsy izany? Toy ny hoe misy pejy marobe izay tsy maintsy noforoniko, manomboka amin'izay mba tsy ho tototry ny saiko aho, amin'ny voalohany dia mamorona MVP fotsiny ao amin'ny pejy fandraisana aho. Ka tsy ho ao daholo ireo subpages rehetra ireo.
onenote fitehirizana eo an-toerana
Ho pejy fandraisam-bahiny mifandray amin'ny zavatra isan-karazany fotsiny izy. Noho izany, tsy maintsy mampifandray amin'ny YouTube, media sosialy izy, heveriko fa tsy hanana taratasy fifandraisana aminy akory aho, tamin'ny voalohany dia manana ny adiresy mailaka, ny tantaram-piainako fotsiny aho, ary angamba tokony hanangana portfolio feno, dia ny rohy mankany dia manana ny dribbble-ko ary hasiako antoka fa havaoziko kely izany satria tsy dia matetika loatra no ataoko. Amin'ity fomba ity no ahazoan'ny olona miditra amin'ny atiny, hainy ny mifandray amiko, mianatra momba ahy izy ireo ary mahita kely ny tranokalan'ny asako, izao fotsiny.
Midika izany fa afaka manangana ny tranokalako vaovao aho. Amin'ny famolavolana ity pejy ity dia mety ho afaka mamorona rafitra famolavolana ho azy aho ary mety ho karazana marika ihany koa ho an'ny tranokalako izay hanamora ny famolavolana ireo pejy hafa ireo. Ary amin'ny ankapobeny heveriko fa ho fanombohana tsara ho an'ilay tetikasa izy io. (mihomehy) Ka io no tetik'asa mahasosotra ahy ho an'ny tranonkalako.
Tsotra kely fotsiny, fa tena tsara ny mieritreritra izay mety hilainao fa tsy manomboka antsasaky ny lalana ary avy eo hitombo hatrany ilay tetikasa. Indrindra ity sombin-kevitra momba izay ho tonga amin'ny tranokalanao ity, heveriko fa tena ilaina ny midina. Noho izany, raha manana tetik'asa tranokala iasanao ianao dia tena mamporisika anao hanao an'io dingana io aloha hahitako hoe inona marina ireo pejy ilaina amin'ny maha-mpanjifa anao, tsy maintsy ataonao ihany izany hamaritana ny tetikasa sy ny habetsaky ny asa famolavolana. ilaina ho anao.
troubleshooter fivarotana microsoft
Saingy tena manampy ahy hahita an'io ihany koa izy ary hahafantatra izay asa ho avy, ary mieritreritra aho fa ho afaka hiatrika an'io tsikelikely. Manantena aho fa nahaliana anao ny mahita izany, ary nahasoa anao izany tamin'ny lafiny sasany. Ary manantena andian-dahatsoratra vaovao avy amiko ianao izay hanova endrika ny tranokalako.
Tena faly aho momba an'io ary efa niresaka momba izany hatry ny ela aho, ary mieritreritra aho fa ny fanaovana lahatsoratra momba azy io dia hanampy ahy hamita azy amin'ny farany satria hangataka anao aho mba hampamoaka ahy. Tsara izany? (chuckles) Izay ihany aloha. Manomeza ankihibe raha nankafizinao izany.
Misaotra nijery ary hahita anao manaraka. Ary heveriko fa ny lahatsoratra manaraka dia ny wireframing ary mety ny endrik'ity pejy fandraisana MVP ity, koa manantena ny hahita anao indray avy eo.
Ahoana no fomba hamoronana sitemap amin'ny teny?
Làlan-kizorana ho an'nyMamorona sitemapamin'nyteny
Dingana 1: manokatra vaovaotenyAntontan-taratasy. Ataovy ao an-tsaina fa mifanaraka ireto torolalana iretoMicrosoft Word2013 ... ...
Dingana 2: Mizaha mankany amin'ny Insert Tab ary kitiho ny SmartArt. ...
Dingana 3: Misafidiana fomba iray amin'ny tabilao fandaminana. ...
Dingana 4: Atombohy ny famenoana ny tabilao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fananganana sitemap ao amin'ny Microsoft Word amin'ny fampiasana ireo fitaovana enti-manana sary maranitra misy. Voalohany, hanova ny fizarana pejy aho satria mieritreritra aho fa mety ho tsara kokoa amin'ny fomba fizahana tontolo izao ary mety hanampy lohateny kely fotsiny aho, ndao hanova ny fomba hitenenana ofisialy ary handeha any amin'ny sitemap tsara isika . Mba hampidirana ny Smart Art antsika, andao mankany amin'ny menio Insert ary Smart etsy ambony.
Ankehitriny ny sitemap dia zavatra iray hierarchical, noho izany dia hisafidy ny Hierarchy isika ary hisafidy ny Chart an'ny Organisation satria toa tena mandeha tsara izany amin'ny sitemap, noho izany dia hokapohiko OK aho fa hataoko lehibe kokoa ity boaty ity ary Hanomboka hamafa ny sasany amin'ireto boaty ireto aho, ka nokapohiko fotsiny mandra-pahatongako iray sisa tavela ary hanomboka amin'ny pejy fandraisam-bahiny isika ka ataovy ny anaran'ny pejy sy ny anaran'ny fisie izay ananantsika ho an'ity pejy, rehefa vita isika dia manampy endrika amin'ny fivezivezena ambaratonga ka ny homewha tever dia miseho amin'ny fitetezana lehibe anay, amin'ireto tranga ireto dia mety ho trano ny manaraka dia serivisy, noho izany ny serivisy dot html dia manampy endrika hafa aorian'izany dia hifandray aminay ary hanana fo maloto antsoina hoe touchpoint html ary miala tsiny fa mila hafa aho andao hanisy endrika hafa aorian'ny serivisy momba antsika miantso azy momba ny p unkt-HTML Mampiasà anarana famaritana foana rehefa miova anarana ny zavatra ho an'ny tranonkala dia ataovy izay lehibe kokoa fotsiny mba hahafahantsika miditra kely kokoa, noho izany izao dia te-hanampy pejy vitsivitsy izay mampifandray amin'ny pejin'ny serivisinay belo w satria io dia sosona iray eo ambanin'ny fivezivezantsika avo indrindra. Ohatra, ndao atao hoe manao serivisy serivisy web izahay mba hahazoantsika pejy mpandrafitra tranonkala ho an'ny famoronana tranokala html ary avy eo tsindrio ny Serivisy indray hisafidianana azy satria te hanampy pejy iray hafa mifandraika amin'ny pejin'ny serivisinay ianao, mba hahafahan'ny endrika ny dokam-barotra eto ambany dia famolavolana tranonkala. Angamba izy ireo mampiantrano sosteam point html ary mamely ny serivisy any an-trano EO, noho izany SEO dot html, tsara izany ka toa somary milay kokoa ity satria te-hanampy pejy vitsivitsy izay mifandray amin'ny pejinay momba anay izahay, ka hanova ny lamina Ity dia amin'ny fisarahana mihantona havia satria tsara lavitra isika, tsara kokoa izao ka izao afaka manampy zavatra ao ambanin'ny pejy About Us, manampy endrika etsy ambany, andao lazaina fotsiny ny tantaran'ny orinasa dia hifidy momba antsika sy Forme hafa isika. etsy ambany ary ity dia mety ho ny ekipa asongadin'ny ekipa HTML 'ary mazava ho azy fa ilay tantara dia miantso ny tantara HTML ary hofidiko ny momba Antsika ary handeha manantona ankavanana aho satria mandeha izay fisie tsara kokoa ary manao vitsivitsy isika misimisy kokoa ny zavatra hampamiratra azy ity somary milay kokoa isika Afaka miakatra sy manova ny loko Azontsika atao ny mamolavola azy mba hahafahan'ny loko isan-karazany amin'ny sosona samy hafa fijery milay ary azontsika atao ny manampy extrastyles izay mahafinaritra be hitako teo alohan'ny sehatra fisaka izay tsara iray hafa ankavia kosa rehefa tonga ny poloney, dia aleo ihany mankanesa any amin'ny poloney ary mandehana Tena sarintany tranokala mahafinaritra ho anao na mora foana ny tranokalanao noforonina tamin'ny Smart Art ao amin'ny Microsoft Word.
Manantena aho fa nahita izany mahasoa ianao
Ahoana no fomba hamoronana sarintany tranokala ao Visio?
Raha eo amin'ny mpizara tamba-jotra na kapila mafy eo an-toerana ny tranokala, tsindrio Browse, navigate to the file you want at the root of your site map, and then click Open. Fanamarihana: Mba hahitana vokatra tsara indrindra, dia ampidiro ny làlana feno sy ny anaran'ny fisie. Ohatra, midira http://www.contoso.com/default.asp fa tsy http://www.contoso.com.
Ahoana no fomba hanarahan'ny Visio lesoka amin'ny tranokala?
Rehefa mametraka sarintany ny tranokalanao ianao dia manaraka ny rohy tsirairay ao anatin'ny masontsivana nofaritanao i Visio ary manara-maso ireo lesoka rehetra sendra azy. Ireo rohy misy lesoka dia miseho eo amin'ny sarintanin'ilay tranonkala, eo amin'ny fikandrana sivana, ary eo am-baravarankely List toy ny endrika misy X mena ao aminy. Ny varavarankely sivana sy lisitra dia miantsona ary mianjera amin'ny ilany havia amin'ny fikandrana sary.
Ahoana no ahafahako mampihena ny haben'ny sarintany Visio?
Ity dingana ity dia tsy voatery, fa mahasoa satria mampihena ny haben'ny sarintany. Tsindrio ny bokotra Settings ary kitiho ny kiheba mandroso. Safidio ny boaty boaty Asehoy ireo Rohy Duplicate ho azo esorina; avy eo tsindrio OK. Ity hetsika ity dia hitazona ny Visio tsy hametaka ho azy amin'ny endrika fanampiny ho an'ny rohy duplicate. Tsindrio OK raha hiteny amin'i Visio hametraka map ny tranokala voatondro.
Ahoana no ahafahako manao sarintany amin'ny tranokalako?
Mahagaga fa haingana ary tsy misy fanaintainana ny fanaovana sarintany tranonkala iray ao amin'ny Visio 2003. Ny fikafika dia ny fahatakarana ny zavatra jerenao raha vao nandefa sarintany ny tranonkalanao ianao. Hitanao, rehefa mampiasa ny asan'ny Visio hamoronana sarintany tranokala ianao dia tsy manintona andiana endrika fotsiny ilay fampiharana — mamorona maodelin'ny tranokalanao izy io.